umatrasi omnye wenkumbulo amagwebu - Rayson
umatrasi omnye wenkumbulo amagwebu
Ukho kwindawo efanelekileyo umatrasi omnye wenkumbulo amagwebu.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana Rayson.siqinisekisa ukuba ilapha Rayson.
Uthotho lovavanyo lweRayson luya kwenziwa, ikakhulu kubandakanya ukonakala koxinzelelo, uhlalutyo lokungakhathali, umphezulu woburhabaxa, ubungakanani bokuchaneka, ukusebenza ngokuchasene nokubola, njalo njalo..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu umatrasi omnye wenkumbulo amagwebu.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
Elona xabiso liphezulu Ixabiso leShumi eliThengisayo kwiNtwasahlobo iMbhede yaseMbusweni + amaxabiso aPhezulu kwiXesha eliKhulu lokuTshisa iMbhede yaseMatheni, into entsha kunye nentengiso eshushu ukusukela ngo-2018 .Iinkqubo zokucinezela kunye nokuqengqa ziyafumaneka.Pocket spring.Best bei., Https: //www.raysonglobal .com.cn
I-Rayson kwi-Rayson Zone Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Iimveliso eziphambili Eyona nto ibonelela umcamelo womnkantsha we-matnress yasentwasahlobo. Umcamelo ophezulu we-bonnell mattress yasentwasahlobo Izixhobo zokusetyenziswa kweRayson zivela kwimithombo enokulandeleka. Iqela lethu loyilo linomthamo wobuchule obutsha, qinisekisa ukuba iRayson yethu ineentlobo ezahlukeneyo zoyilo, ezonwabisa ngobuhle, kunye zoyilo ezisebenzayo. umcamelo ophezulu we-bonnell mattress yasentwasahlobo Imveliso isetyenziswa kwizicelo ezininzi ngenxa yokuphuma kwayo ngokukhawuleza. Iluncedo ngakumbi xa kukho imfuneko yamandla okwethutyana.
I-Foam eQinisekisiweyo yeKhonkco ephezulu iPocket Matress + I-https: //www.raysonglobal.com.cn